editor — Sat, 12/01/2018 - 05:43
"ओहो! रक्षा कता हो? के छ खबर?" कसैले आकाशवाणी गरेर बोलाएझै लाग्यो। को रहेछ मेरै जस्तो नाम गरेको व्यक्ति, पछाडि फर्केर हेरें।
"रक्षा केहो बिर्सियौ? हामीसँगै स्कुल पढेको के त। हेर कति चाडैं बिर्सिएकी म कल्पना क्या !"
"अरे, तिमी कल्पना?"
"हो नि, तिमीले त बिर्सिछौ क्यारे !"
यजेन्द्र — Mon, 11/12/2018 - 20:27
पाइला गर्हौँ छन् आज उसका, अफिसबाट सिधै घरतर्फ पनि गएनन् । ऊ पुग्छ एउटा एकान्त टाकुरामा । यहाँ धेरै मानिसहरू आउँछन । तर यहाँ एकान्तपना को महशुश हुन्छ र यसैको लागि मानिसहरू यहाँसम्म आउँछन । त्यही भीडमा एकान्तपना खोज्दै आज उमेश आइपुगेको छ । मनभित्र कुरा खेलाउँदै ऊ यताउती नजर फ्याँक्छ, जालमा पर्छ एउटा भँगेरा ।
editor — Tue, 11/06/2018 - 18:00
"ममी ममी हेर्नुस्न हाम्रो परेवाले आफ्नो बच्चालाई चुच्चो जोडेर के गरेको ? हेर्नुस्न छिटो !" आयुष्माले भनिन्।
"एए, त्यो ; त्यो त परेवाले आफ्नो बच्चालाई चारो खुवाएको नि ! तिमीलाई थाहा थिएन ?"
"अहँ, थाहा थिएन ममी। अनि परेवाले जसरी नै सबै आमाहरूले आफ्ना बच्चालाई चारो खुवाउछन् हो ?"
प्रेम भूलको परिणाम
editor — Tue, 10/30/2018 - 03:29
त्यसपछि उसले भनी, "तपाईको कथाले नराम्रो गरी रुवायो।"
मैले भने, "हो के ? यसै भनेको होला।"
"हैन... हैन..., सत्ते होला। किन ढाँट्नु र!" उसको जवाफले अलिकति शान्त पार्यो। तर, अनेकन् प्रश्नहरू उब्जाएर।
kbs — Mon, 10/15/2018 - 03:22
साप्पोरो (उत्तर जापानको महानगर)का सडकमा यो वर्षको पहिलो हिमपात शुरु भएको छ। पानीका थोपाहरू हिउँमा परिणत हुन्छन्, हिउँका साना डल्लाहरू पानीमा। साप्पोरोको सडकमा हिउँ त्यस्तो रोमान्टिक लाग्दैन। भन्न पर्दा यहाँको हिमपात कुलको नाम बिगार्ने नातेदारजस्तै हो।
अक्टोबर २३ तारिख। शुक्रबार।
अप्रिलको एक बिहान शतप्रतिशतकी केटीसँग भएको भेटको बारेमा
editor — Sun, 10/14/2018 - 03:46
अप्रिलको मौसम सफा भएको एक बिहान, हाराजुकु(१) पछाडिपट्टिको सडकमा मैले शतप्रतिशतकी केटीलाई भेटें।
editor — Sun, 10/14/2018 - 03:43
सूर्यले मधुरो किरण छरेको छ । विहानको दस बजिसकेको छ । दुर्गा आधारभूत विद्यालय, जगतिपुर, जाजरकोटका ढोकाहरू खुलिसकेका छन् । कार्यालय सहयोगी घाँटी तन्काएर उत्तरतिर हेर्दा छन् । विद्यार्थीहरू चौरमा दौडधुप गर्दा छन् । शिक्षकहरू चाहिँ कार्यालयमा बसेर बाहिरफेरो नजर दौडाउँदा छन् । स्कुल छेवैको मूलबाटो भएर मानिसहरूको पातलो आवतजावत कायमै छ ।
खोर्साने बूढाको कर्तुत
editor — Fri, 10/12/2018 - 00:41
झण्डै एक लोटा पानी घुट्क्याए उनले । अनि पुर्पुरोमा हात राखेर लामो सास फेरे ।
उदयपुरको पोखरेमा बीस रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी लगाएर अगुवा कृषकमा दरिएका टंकबहादुर राउत उर्फ खोर्साने बूढा त्यहाँका जल्दाबल्दा व्यक्ति थिए । पञ्चायत जितेपछि उनको रवाफ दिन दोगुना रात चौगुणा बढ्न थालेको थियोे । पुर्ख्यौली सम्पत्ति छँदै थियोे , त्यहाँमाथि निकै चल अचल सम्पत्ति थपे उनले ।
बत्ती र पुतली (सूत्रकथा)
सुवास “दीप” — Fri, 09/21/2018 - 22:20
उफ! कस्तो यो सम्मोहन?
यसमा मेरो के दोष? जल्छु भन्ने जान्दा जान्दै पनि होम्मिन आउँछौ !
HomSuvedi — Wed, 09/19/2018 - 09:32
अस्तिसम्म एसएलसी भनिएको र अहिले खै के भनिएको कुरा छोरीले राम्रो ग्रेटमा उत्तीर्ण गरेको हुँदा घरमा विद्यालयबाट छोरी माग्नेको लस्कर लाग्नु अघि नै एक नामी उच्च विद्यालयमा छोरीलाई लिएर गए प्रेमबहादुरजी । स्कूलको कम्पाउन्डमा पुग्दा बाहिरैको दोकानमा केटाकेटीहरुको भिड रहेछ । सबै हेर्दा स्मार्ट नै छन् । टाइ लगाएका छन् । राम्रो परिधानमा छन् । घुँडा च्यातिएको लुगा पनि लगाएको छैन । स्कुल ठिकै लाग्यो ।
editor — Mon, 09/17/2018 - 01:15
भित्र पस्नासाथ युवतीले आफ्ना ठूला ठूला नजर घुमाएर चारैतिर हेरी। अनि कुर्सीमा गइ बसी। उसका उत्सुक नजरले कसैलाई खोजिरहेको झैँ लाग्दथ्यो।
editor — Mon, 09/17/2018 - 01:11
“मलाई पनि एउटा पोलेको मकै दिनुहोस् त दिदी“, सडकपेटीको एउटा कुनोमा बसेर मकै पोल्दै गरेकी एउटा अधबैंसे महिलाको अघि उभिएर मैले भनेँ ।
editor — Mon, 09/17/2018 - 01:00
चौतारो साक्षी छ (कथासंग्रह)
"नमस्कार सर!" धेरै वर्षको अन्तरालपछि पनि उसले उनलाई चिनेकी थिई। बिर्सनु पनि कसरी ? आजभन्दा १५ – १६ वर्ष अघि जुन गुरुलाई, जस्तो अवस्थामा, जस्तो रुपमा छोडेकी थिई मानौं त्यही क्षणलाई बाँधेर टक्क अडिएको झैँ। मझौला कद, गहुँगोरो रंग, ठुलो निधार र आँखामा मोटो लेन्सको चस्मा, अनि ती आँखाभित्रबाट चिहइरहेका दुई स्नेहशक्ति आँखा।
HomSuvedi — Fri, 08/31/2018 - 13:16
"…..हजुर नमस्ते सर । आज मेरो अन्तर्वार्ता छ… हजुर, हजुर गृहस्थ भन्ने च्यानलमा हो । यसो हेरेर प्रितिक्रिया दिनुहोला ।"
टेलिभिजन अन गर्दै पुष्पजीले आफ्नो साथीलाई फोन गरे अनि भान्सामा केके गरिरहेकी पत्नीलाई बैठकबाटै कराए "ए निर्मला लौ न अलिक छिटो गर । खाँदै हेर्दै गरौं । अन्तर्वार्ता आउने बेला भइसक्यो ।"
HomSuvedi — Sun, 08/19/2018 - 23:21
“हेर्नुहोस् अँझ पनि म भनिरहेको छु । हाम्रो लागि यो बडो लाजलाग्दो कुरा छ । हाम्रो समाजबाट बालश्रमलाई कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने कुरामा हामी धेरै सचेत छौ । वास्तवमा यो हाम्रा लागि मात्र नभई सारा दुनियाँकै लागि लाजमर्दो कुरा हो । बालश्रम र बाल शोषण जसरी पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।”
“तपाईको भनाइ शतप्रतिशत सही हो । यसबाट हामीहरुले अन्तरराष्ट्रिय रुपमै इज्जत गुमाइरहेका छौ । होटलमा हेर्नु बालश्रमिक उत्तिकै छन् कारखामा हेरौ वा धरेलु कामदाका रुपमा हेरौ सवितर नै । बालबालिकाको सबै अधिकार पनि हामीहरुले लुटिरहेका छौ । उनीहरुले पढ्न पाउनु पर्ने खेल्न पाउनु पर्ने र अन्य समाजमा बसेर श्रमरहित जिन्दगी बाँच्न पाउने अधिकार पनि हामीले सबै बर्वाद पारिदिएका छौ ।”
सानो कापी (लघुकथा)
मेरो आँसु आज मात्रै
उत्तरी र दक्षिणी
टाढा धेरै टाढा उडेका रंगीन चरा
आइसे माया (गजल)
अनौँठो, अन्जान, अदृश्य
नेपाल एकदिन फर्कन्छु (?!)
परदेशिको सन्देश स्वदेश फर्कनेलाई
कुम्भ मेला २०१३– एक चिनारी
आउ नया बर्ष तिमी
तिम्रो चूम्बनको कसम
तरकारी महिमा : कुभिन्डो र लौका (तितो-पिरो)
तयार परौं : मन्त्री फेरिने लगन हुन लाग्यो
ड्राइङ रूममा कुखुरो